चर्चित गायक पुस्कलको “सतीप्रथा ”ट्रेन्डिङ नम्बर ४ मा (भिडियोमा) « Salleri Khabar
चर्चित गायक पुस्कलको “सतीप्रथा ”ट्रेन्डिङ नम्बर ४ मा (भिडियोमा)
पछिल्लो समय दर्शकले आधुनिक,र्याप,पपसँगै लोक दोहोरलाई पनि रुचाउने गरेको पाइन्छ । अहिले यस्तै नेपाली लोक दोहोरीबाटै चर्चा परिचर्चा बटुल्न सफल बहुचर्चित गायक पुस्कल शर्मा र गायिका बिष्णु माझीको आवाजमा रहेको नयाँ गीत “सतीप्रथा ”म्युजिक भिडियो शनिबार सार्बजनिक भएको छ । उक्त गीत अहिले ट्रेन्डिङ नम्बर ४ मा परेको छ ।
नेपाली समाजको यथार्त वास्तविक घटना बोकेको गीतलाई गायक पुस्कल शर्माले चित्रण गरेका छन् । उनि एक सफल गायकको रुपमा चर्चित छन् किनभने उनी हाम्रो समाजमा घटेका सत्य,तत्थ कथालाई आफ्नो गीतमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
लाखौं दर्शकले भने गर्छन, उनको गीत हेर्दा फिल्म हेरे जस्तो लाग्छ । उनको गीत हेरेरै अरुले पनि उनको जस्तो गीत बनाउन खाजेको जस्तो लाग्छ । गायक पुस्कल लोक दोहोरि गीतलाई परिवर्तन ल्याउने गायक भन्दा फरक नपर्ला ।
गीतमा गायक पुस्कलकै शब्द,संगीत ,स्वर रहेको छन् भने म्युजिक भिडियो १४ मिनेट १३ सेकेन्डको रहेको छ। पछिल्लो समय नेपाली लोक दोहोरीमा दर्शक आकर्षण भएको देखिन्छ ।
‘सतीप्रथा’ मा आधारित गीत अहिले लाखौ दर्शकले अत्यन्तै रुचाएका छन् । ४५ लख २ हजार १ सय ८५ भिवर्स आएको छ भने यस भिडियोलाई १६ हजारले लाइक गरेका छन् भने ६ सय ८१ ले डिसलाइक गरेका भिडियोमा २ हजार १ सय ६७ले कमेंड गरेका छन् । यसो हेर्दा गीतलाई धेरैले रुचाएको देखिन्छ । गीतमा मनछुने डाइलोक ‘छोरा जन्मे पनि छोरी जन्मे पनि केहि न केहि त जन्मेको होला उसैको मुख हेरेर उसैका लागि बाँच्नु है-राधा !
उक्त गीतलाई मालश्री रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड भएको यस गितलाई पुस्कल शर्माकै अफिसियल युट्युब च्यानल बाट सार्वजनी भएको छ । उक्त गीतलाई बिनोद बाजुरालीले एरेन्ज गरेका हुन्।
गीतको मुख्य भूमिकामा आमा सरिक के.सी, छोरी मिकेसना पोखरेल र बुवाको भूमिकामा गायक पुस्कल स्वयं आफैले अभिनय गरेका छन् ।
सुरेश श्रेष्ठद्वारा छयांकन भएको भिडियोलाई दिपक विस्ताले सम्पादन गरेका छन् भने भिडियोलाई पनि गायक पुस्कलले नै निर्देशन गरेका छन् ।
ट्रेन्डिङ नम्बर ५ माहेर्नुहोस् भिडियोमा:
‘टिम कार्टून ’ले ल्याए नयाँ गीत (भिडियोमा )
उक्त गीत आफ्नो टिमले निकै मेहेनत गरेर बनाएको छौँ दर्शकबाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया आउने आशा
पलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको २४ घण्टामा ट्रेन्डिङ २ मा !
दर्शकले निकै नै रुचाएका छन् भने दर्शक बाट उक्त गीतले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ ।